नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस फेला परेपछि भित्रियो कि नयाँ भाइरस ! - हाम्रो जनकपुर
नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस फेला परेपछि भित्रियो कि नयाँ भाइरस !
२०७७ पुष १२, आईतवार ०७:१६
उनीहरूको स्वाब नमुना संकलन गरी नेपालमा नयाँ भाइरस प्रवेश भए÷नभएको अध्ययन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा डा : जागेश्वर गौतमले बेलायतबाट सीधै र अन्य मुलुकबाट बेलायत ट्रान्जिट हुँदै आउने नागरिकलाई निगरानीमा राखिएको जानकारी दिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले बुधबार बसेको नयाँ भाइरसको स्वरूप नेपालमा भित्रिएको छ÷छैन भन्नेबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)का कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवालीले बेलायतबाट आएका व्यक्तिको नमुना लिएर जिन सिक्वेन्सिङको प्रक्रिया सुरु गरिने बताए। ‘स्वाब लिइसकिएको छैन। स्वाब लिएको हप्ता÷दश दिनभित्र नतिजा आइसक्छ’, डा। ज्ञवालीले भने। डा। ज्ञवालीका अनुसार दोस्रो पटक गर्न लागिएको आनुवंशिक अध्ययनमा ४०÷५० वटा स्याम्पल लिएर अध्ययन गरिँदै छ।
परिषद्ले आनुवंशिक संरचना अध्ययन गर्दा नेपालमा भेटिएको भाइरस भारत, बंगलादेश र साउदी अरबको भाइरसको प्रकृतिसँग मिल्दोजुल्दो पाइएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको झन्डै सात महिनापछि पहिलो पटक १५ वटा नमुना संकलन गरेर जिन सिक्वेन्सिङद्वारा आनुवंशिक अध्ययन गरिएको थियो। नयाँ स्वरूपको भाइरस फैलने क्रम तीव्र भएपछि भारत, स्पेन, हङकङसहित ४० भन्दा बढी मुलुकले बेलायतबाट हुने उडान प्रतिबन्ध गरिसकेका छन्।आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट